Kuwedzera dzichikunetsa kubhururuka pamusoro ezvokutengeserana ndege ari kutyaira vanhu vakawanda kuti private ndege charters. Long tsika mitsetse, Zwa akationgorora, ungana dzendege, inongova mimwe nematambudziko kubhururuka pamusoro ezvokutengeserana jets. Vanhu anowanzoita kubhururuka kirasi yokutanga kana bhizimisi kirasi vava kuramba kutarira nemari private ndege charters. zvisinei, kusiyana ne rokutengesa vendege, yayo kwete nyore kuwana mari chartering jeti. Saka pano isu kupindura mubvunzo: zvakawanda sei kunzanga kuti bumbiro muchihwande ndege?
Other Service We Hunopa
Empty gumbo Private Jet chata
Mari chartering jeti anopiwa mu madhora paawa ndege. sezvaitarisirwa, mari kunosiyana-siyana pakati akasiyana yemashoko ndege. Vamwe ndege vari dzinoyevedza, asi vamwe havana kuti dzinoyevedza. Vamwe ndege vane nzvimbo vanopfuura gumi nevaviri vatakurwi, nepo maduku vane shoma dzinenge ina mutakurwi zvigaro chete.
Mumwe duku bumbiro ndege pamisika ndiye Cessna Citation Mustang, izvo zvinogona inogara vanhu vanenge 4-5 vakatakurwa. Zvangoitikawo kuti yakachipa pashiri ndege kuti bumbiro: unogona bumbiro iri Cessna Citation Mustang inenge $1700 paawa ndege.
Zvishoma yakakura kupfuura Citation Mustang ndiye Learjet 60, izvo zvinogona gadzai kusvika 8 vakatakurwa. Chakaitwa Bombardier Aerospace muna Wichita, Kansas zvingadai mari iwe pamusoro $3400 paawa ndege kuti bumbiro iri Learjet 60.
Panguva yepamusorosoro kuguma ndege akafanana Gulfstream 550, iyo inenge $8600 paawa kubhururuka nguva. Zvinobatsira zvishoma kuti rinogona inogara vanhu vanenge 14-19 vakatakurwa.